Yiziphi Izixhumanisi Zezinwele Ezincane kanye Nezinzuzo eziza nazo? – SL Raw Virgin Hair LLC.
Yiziphi Izixhumanisi Zezinwele Ezincane kanye Nezinzuzo eziza nazo?
Kunezinsiza eziningi, ukwelashwa, nezindlela uma kuziwa ekuthuthukiseni ukubukeka kwezinwele. Ukwengeza izandiso zezinwele yinto abesifazane abaningi abayithola iduduza futhi indlela eyingqayizivele yokubhekana nezinkinga zabo zezinwele. Abanye babheka kubo ukuze basize izinwele zabo zemvelo zikhule futhi zibe namandla. Abanye bafuna ivolumu nokujiya, abanye bafuna ubude kuphela kodwa sekukonke, konke kuncike ekuthuthukiseni ubuhle bomuntu ngamunye.
Ukushintsha usuka kokunye uye kokunye, ngokushesha futhi kulula, lokho okungapheli kungenziwa ngokufaka izandiso zezinwele. Imboni yezinwele ihlale ithuthuka futhi isebenza ekuthuthukiseni yonke inqubo yokwandiswa kwezinwele kanye nokwethula izinto ezintsha. Kuzitayela zakamuva zezinwele, izixhumanisi zezinwele ezincane zibusa izimfuno zezandiso zezinwele, futhi nakhu konke odinga ukukwazi ngakho:
Ziyini izandiso zesixhumanisi esincane?
Ithrendi yezandiso zesixhumanisi esincane yaziwa nangokuthi izandiso zezinwele eziluphu kanye nendlela yokuhlanganisa ebandayo. Inendlela emisha ekusetshenzisweni kwezandiso zezinwele ezibambe amehlo ochwepheshe abaningi bezinwele. Okwenza izixhumanisi zezinwele ezincane zihluke futhi zithakazelise, izixhumanisi ezincane ezibukeka njengobuhlalu obuncane obusebenza njengezixhumanisi ezixhuma isandiso sezinwele nezinwele zakho zangempela.
Iyini inqubo yesitolimende sabo?
Izixhumanisi ezincane zincane kakhulu futhi zisetshenziswa ezinweleni zakho zemvelo, umucu ngomucu, ngethuluzi lokufaka elikhethekile Ziwukuxhumana phakathi kwezinwele zemvelo ne izandiso. Okuhle futhi okuyingqayizivele ngale nqubo ukuthi izinwele akudingeki ziboshwe ngaphambi kokusetshenziswa kwezandiso. Futhi akukho ukusetshenziswa kweglue noma intambo.
Iziphi izinzuzo zokufaka izixhumanisi zezinwele ezincane?
Ukubukeka kokugcina ngemva kokufakaizandiso zezinwele zesixhumanisi ezincane kuyizinwele ezibukeka ngokwemvelo - into okunzima kakhulu ukuyifinyelela ngezinhlobo eziningi zezinhlelo zokusebenza zokunweba izinwele. Ubuhle babo buvela ekubukeni abakunikezayo uma kuhlanganiswe nezinwele zemvelo. Izintambo ezincane kanye nezixhumanisi ezincane cishe azibonakali futhi zingaqala zifike phezulu njengezimpande. Zingahlala kusukela ezinyangeni ezi-3 kuye kwezingu-5, okuxhomeke ngokuqinisekile emjikelezweni wakho wokukhula kwezinwele nokuthi uzinakekela kanjani izinwele zakho.
Inketho enempilo nephephile
Njengoba izixhumanisi zezinwele ezincane zingadingi ukusetshenziswa kwanoma iyiphi i-glue, itheyiphu yezinwele, ukushisa, nanoma yiziphi ezinye izithako noma amakhemikhali anokhahlo, ziyindlela enempilo nephephile kunazo zonke izinwele zakho Kodwa-ke, ungalokothi uzenze wedwa - hlala funa sisize noma usithinte SL Izinwele Ezingavuthiwe . Sizojabula kakhulu ukusiza!
Izandiso zesixhumanisi sezinwele ezincane zivula izinketho ezahlukene zokwenza izinwele zakho Eziqondile zingashintshwa kalula zibe ama-curls ayengayo noma amagagasi, noma aqondiswe kalula. Ikhwalithi yezandiso zezinwele zesixhumanisi esincane ivumela ukudlala ngobude, umbala, nokuthungwa okuhle kakhulu kulabo abanesizungu ngokubukeka okukodwa kuphela.
Uma ubeke ingqondo yakho kuzixhumanisi zesandiso sezinwele ezincane ngakho-ke siphakamisa ukuthi uhambe 100% izixhumanisi ezincane ze-Curly I-tip. Ubuhle balezi zandiso buvela ekuhlanganiseni okuhle kakhulu kwezinwele ze-Virgin kanye nenqubo yezixhumanisi ezincane. Babukeka bemvelo futhi bangempela kangangokuthi akekho ozobaqaphela futhi uzozizwa njengezinwele zakho. Izinwele zingafakwa umbala ukuze zivumelane nombala wezinwele zakho.
Ukuthola ezinye izinketho zokuthi ungathuthukisa kanjani ukubukeka kwezinwele zakho, yiya kokuthi SL Raw Virgin Hair bese ubheka kuphalethi yethu yemikhiqizo.